happy birthday ချစ်သူ – PoemsCorner
အနားမှာမရှိတော့တဲ့ချစ်သူအတွက်..ကျွန်မဆုတောင်းပေးမြဲဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးမှာ..ချစ်သူကိုပျော်ရွှင်နေစေချင်ပါသည်။ထားခဲ့ရက်သူကို..တမ်းတစိတ်ကြောင့် သက်ပြင်းတစ်ခါရှိူက်မိတိုင်း..စူနစ်နာကျင်ရပေမယ့်..
ဟု ရွှတ်နောက်နောက်ပြောခဲ့ဖူးသော..ချစ်သူသည်..ယခုနှစ်မိုးရာသီတွင်..သူဝယ်ထားသောထီးကြီးကြီးနှင့်… ဘယ်သူ့ကိုများဆောင်းပေးနေမှာပါလိမ့်…
လေပြင်းတို့သည် ရွာမယောင်ပြသော..မိုးတိမ်သားတို့ကိုလွင့်မျောပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သော်လည်း.. အတိတ်ကိုတော့မပျောက်ကွယ်စေနိုင်ပါ။
အိမ်ပြန်ချိန်နောက်ကျတတ်တဲ့.ကျွန်မအတွက်.သူကစိတ်မချတတ်ခဲ့သလို ဆိုင်ကယ်မြန်မြန်မောင်းတတ်တဲ့ သူ့အတွက် ကျွန်မက စိုးရိမ်နေခဲ့ဖူးသည်။
ချစ်သူကိုအပြင်မတင်ရက်သောအခါ ကံကြမ္မာ ကိုသာအပြစ်တင်မိပါတော့သည်။
ခွဲခွါခြင်းသည် ကျန်ခဲ့သူကိုရော..ချန်ခဲ့သူကိုပါ..နာကျန်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်း အခြေအနေမတူသူနှစ်ယောက်အဖို့တော့…ခံစားချက်ခြင်းလည်း..ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတူညီပါ။
စိတ်ကူးထဲမှာမှီနွဲ့ခဲ့ဖူးပေမယ့် အပြင်မှာတစ်ခါမှမမှီနွဲ့ခဲ့ဖူးသော.ချစ်သူပခုံးဘေးမှာ.. ကျွန်မမဟုတ်သော အခြားတစ်ယောက်အစားထိုးရောက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။
သူ့အခန်းထဲမှာကပ်ထားသည်ဆိုသော ကျွန်မရဲ့ဓါတ်ပုံများနေရာတွင် အခြားတစ်ယောက်၏ ဓါတ်ပုံများနေရာယူထားနိုင်ပါသည်။
ဟက်ဟက်ပက်ရယ်မောတတ်သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်အစား သိမ်မွေ့စွာပြုံးရယ်တတ်သူလေး တစ်ယောက် အစားထိုးရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့..ချစ်ခဲ့မိပါသည်ဆိုသော မိန်ကလေးတစ်ယာက်ကိုသတိရကောင်း သတိရမိနိုင်ပါသည်။ စလင်းဒီယွန်ရဲ့ To love you more သီချင်းသံကိုကြားမိတဲ့အခါ၊ စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်သောက်တဲ့အခါ၊ မိုးရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါ…
တကယ်လို့များ …မိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့လျှင် ချစ်သူ့ဘေးနားက မိန်းကလေးကို အကြည်လင်ဆုံးပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါအုံးမည်။အချိန်နဲနဲတော့ရသေးတယ် မဟုတ်လားကွယ်။
In: ဝတ္ထု Posted By: nawayeyarwaddy Date: Aug 5, 2010
Happy Birthday To My Naughty Boy
HAPPY BIRTHDAY MY NAUGHTY BOY
Leave comment 8 Comments & 927 views
အရမ်းပဲ ကောင်းပါတယ်ရှင် …. နောင်လ်လေးလဲ ….. အဲ့လိုပဲ ချစ်ခဲ့ဖူးတယ် ….
By: နောင်လ်လေး at Aug 6, 2010
အရမ်းကောင်းတယ်…။ဒီကွန်မန့်လေးကို တော့ တကယ်ခံစားမိတာနဲ့ဝင်ရေးဖြစ်သွားတယ်…။ချစ်သူဆိုတာ အရာအားလုံးထက်လေးနက်ပါတယ်..။ကျွန်တော့်အတွက်ပေါ့။ တကယ်ချစ်ခဲ့တယ်။တကယ်လဲချစ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်..။နောက် ဘယ်သူမှထားရစ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုးလေးပဲ
By: naynyo23 at Aug 11, 2010
တကယ်ခံစားရတာသိလား မကြာသေးခင်က ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်နဲ့လဲအရမ်းတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့လေ
ချစ်သူရဲ့ လက်ထပ်ပွဲကို အပြူံးမပျက်တက်ရင်း ရင်နာနာနဲ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ဘူးတယ် သူ့ဘ၀ပျော်ရွှင်ဖို့ကို
ဒီလို ခံစားချက်တွေကိုအလေးပေးရေးထားတာ တို့ကိုမဟုတ်ပေမယ့် အဖြစ်ချင်းတူတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာသိရလို့ ကျေးဇူး
By: May Han at Aug 18, 2010
ဒီနေ့ သူ့ မွေးနေ့ …
ေ၇ှ့ နှစ်က ကဗျာလေး ကိုတိုင်ေ၇းပီး
သူ့ေ၇ှ့ေ၇းအတွက် အားပေးခဲ့ တယ်
ဒီနှစ်တော့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးတွေ ဖတ်မယ်ဆိုပီး
ဒါလေး ကို ဖတ်လိုက်တာ…
ချစ်သူကို အလေးအနက်ထားပီး ချစ်ကြတဲ့ သူတွေ
တူညီတဲ့ တန်ဖိုးထားမှူတွေ ၇ပါစေနော်
By: သော်တာ at Aug 18, 2010
အထူးသဖြင့်…မေဟန်ကိုရော…ချစ်သူကို အလေးအနက်ထားပီး ချစ်ကြတဲ့ သူတွေ
တူညီတဲ့ တန်ဖိုးထားမှူတွေ ၇ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့သော်တာကိုရော..ကျေးဇူးပါနော်
By: နော်ဧရာဝတီ at Aug 19, 2010
By: purple at Sep 4, 2010
ကြိုးစားနေပါတယ်.. အကြည်လင်ဆုံးပြုံးပြနိုင်အောင်… အရမ်းကြိုက်ပါတယ်… ချစ်သူကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးချင်တာ… ဒါလေးနဲ့တင်ပဲ.. ပြောချင်တာတွေပြောခွင့်ရလိုက်သလိုပဲ….
By: zthu at Oct 16, 2010
သူ့ချစ်သူက သူ့ကို စိတ်ညစ်အောင်လုပ်ရင်တောင် တို့က သူပျော်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ အပြစ်မမြင်ပါဘူး ချစ်ချင်တာပဲ သိတဲ့နောက် ………………………. 🙂
By: raingirl at Oct 21, 2010